वृद्धहरूको आदर गरौं | अध्ययन
बेग्लै धर्म मान्ने नातेदार तथा परिवारका सदस्यहरूको मनसम्म पुग्नुहोस्
आत्मत्यागी मनोभाव देखाइरहनुहोस्
यहोवाको सेवा गर्दा आनन्दित भइरहनुहोस्
पारिवारिक उपासना​—यसलाई अझ रमाइलो बनाउन सक्नुहुन्छ कि?
वृद्धहरूको आदर गरौं
वृद्धहरूको हेरविचार गरौं
तपाईंको बोली​—‘हुन्छ’ भनेर पछि ‘हुँदैन’ भन्नुहुन्छ कि?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किसोंगे कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण | मार्च २०१४
“वृद्ध मानिसको आदर गर।”—लेवी १९:३२.
वफादार वृद्धहरूलाई यहोवा कसरी हेर्नुहुन्छ?
वृद्ध आमाबुबाप्रति हुर्किसकेका छोराछोरीको जिम्मेवारी के हो?
मण्डलीले वृद्धहरूको कसरी आदर गर्न सक्छ?
१. अहिले मानिसहरू कस्तो दुःखद परिस्थितिको सामना गर्छन्‌?
मानिसहरूले दुःख भोगेको, उनीहरू कमजोर हुँदै गएको र वृद्ध भएको यहोवा कहिल्यै चाहनुहुन्नथ्यो। यहोवाको उद्देश्य मानिसहरू कुनै रोगबिमारविना प्रमोदवनमा बसून्‌ भन्ने थियो। तर अहिले “सारा सृष्टि . . . एकसाथ सुस्केरा हाल्दै पीडाले छटपटाइरहेको छ।” (रोमी ८:२२) मानिसहरूले पापका असरहरू भोग्नुपरेको देख्दा परमेश्वरलाई कस्तो लाग्छ होला, सोच्नुहोस् त! साथै सबैभन्दा धेरै मदतको खाँचो पर्ने बेलामा थुप्रै वृद्धलाई बेवास्ता गरिएको छ।—भज. ३९:५; २ तिमो. ३:३.
२. मण्डलीमा वृद्ध भाइबहिनीहरू हुनु हाम्रो लागि किन खुसीको कुरा हो?
२ मण्डलीमा वृद्ध भाइबहिनीहरू हुनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। ती भाइबहिनीको अनुभवबाट हामी लाभ उठाउँछौं र उनीहरूको विश्वासको अनुकरण गर्न चाहन्छौं। ती वृद्ध भाइबहिनीमध्ये केही त हाम्रै नातेदार वा परिवारका सदस्य होलान्‌। तर ती भाइबहिनी हाम्रा नातेदार वा परिवारका सदस्य होऊन्‌ या नहोऊन्‌, हामी उनीहरूप्रति चासो राख्छौं। (गला. ६:१०; १ पत्रु. १:२२) यहोवा वृद्धहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अनि ती वृद्धहरूप्रति परिवारका सदस्यहरू र मण्डलीको जिम्मेवारी के हो, आउनुहोस् छलफल गरौं।
३, ४. (क) भजन ७१ का लेखकले यहोवालाई कस्तो बिन्ती गरे? (ख) मण्डलीका वृद्धहरूले यहोवालाई कस्तो बिन्ती गर्न सक्छन्‌?
३ भजन ७१:९ का लेखकले परमेश्वरलाई यस्तो बिन्ती गरे: “बूढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्, मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछोड्नुहोस्।” भजन अध्याय ७० को शीर्षकमुनि सानो अक्षरमा “दाऊदको भजन” भनेर लेखिएको छ। भजन ७१ पनि अध्याय ७० कै बाँकी भाग हो जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण भजन ७१:९ का शब्दहरू पनि दाऊदले नै लेखेको हुनुपर्छ। तिनले युवावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मै यहोवाको सेवा गरे। यहोवाले तिनलाई ठूलठूला काम गर्न प्रयोग गर्नुभयो। (१ शमू. १७:३३-३७, ५०; १ राजा २:१-३, १०) तैपनि वृद्धावस्थामा तिनले मदतको लागि यहोवालाई बिन्ती गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरे।—भजन ७१:१७, १८ पढ्नुहोस्।
४ आज पनि थुप्रै वृद्धहरू दाऊदजस्तै छन्‌। वृद्धावस्था र “दुःखको समय”-मा पनि उनीहरू यहोवाको प्रशंसा गर्न सक्दो गर्छन्‌। (उप. १२:१-७) उनीहरूमध्ये धेरैजसोले प्रचार अनि अरू काम पहिलेजति गर्न सक्दैनन्‌ होला। तर उनीहरूले पनि यहोवाको आशिष्‌ र हेरविचारको लागि बिन्ती गर्न सक्छन्‌। ती वफादार भाइबहिनीहरू यहोवाले बिन्ती सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छन्‌। किन? किनकि यहोवाले दाऊदलाई पनि त्यस्तै विषयमा प्रार्थना गर्न प्रेरित गर्नुभयो।
५. यहोवा वफादार वृद्धहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
५ यहोवा वफादार वृद्धहरूको मोल गर्नुहुन्छ र उहाँका सेवकहरूले पनि ती वृद्धहरूको आदर गरेको आशा गर्नुहुन्छ। (भज. २२:२४-२६; हितो. १६:३१; २०:२९) लेवी १९:३२ यसो भन्छ: “बूढा-पाकाका सम्मानमा उठ र वृद्ध मानिसको आदर गर। तिमीहरूले परमेश्वरको भय मान। म परमप्रभु हुँ।” यी शब्दहरू लेखिएको समयमा वृद्धहरूको आदर गर्नु गहन जिम्मेवारी थियो र आज पनि कुरा त्यही हो। तर वृद्धहरूको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी खासगरि कसको हो?
६. आमाबुबाको हेरविचार गर्ने विषयमा येशूले कस्तो उदाहरण बसाल्नुभयो?
६ परमेश्वरको वचन यसो भन्छ: “तिमीले आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू।” (प्रस्थ. २०:१२; एफि. ६:२) येशूले आमाबुबाको हेरविचार गर्न नचाहने फरिसी र सदुकीहरूलाई दोषी ठहराएर यो आज्ञा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा देखाउनुभयो। (मर्कू. ७:५, १०-१३) येशू आफैले पनि राम्रो उदाहरण बसाल्नुभयो। जस्तै, यातनाको खम्बामा टाँगिएको अवस्थामा समेत येशूले आमाको चिन्ता गर्नुभयो, जो सायद विधवा थिइन्‌। भरोसायोग्य चेला यूहन्नालाई येशूले आफ्नी आमाको हेरविचार गर्ने जिम्मा दिनुभयो।—यूह. १९:२६, २७.
७. (क) आमाबुबाको हेरविचार गर्ने विषयमा प्रेषित पावलले कस्तो सिद्धान्त उल्लेख गरे? (ख) कुन विषयबारे बताउँदा पावलले यो सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए?
७ तिमोथीलाई लेखेको पत्रमा प्रेषित पावलले ख्रीष्टियनहरूले आफ्नो परिवारको हेरविचार गर्नुपर्छ भनेर बताए। (१ तिमोथी ५:४, ८, १६ पढ्नुहोस्) मण्डलीबाट कसले आर्थिक सहायता पाउन सक्छन्‌ भन्नेबारे बताउँदा पावलले यो सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए। वृद्ध विधवाहरूको हेरविचार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ख्रीष्टियन छोराछोरी, नातिनातिना र आफन्तहरूको हो भनेर तिनले बताए। यसो गरेमा मण्डलीलाई आर्थिक भार पर्ने थिएन। त्यसैगरि आज पनि ख्रीष्टियनहरूले खाँचोमा परेका आफन्त तथा परिवारका सदस्यलाई मदत गरेर “परमेश्वरको भक्ति” गर्न सक्छन्‌।
८. वृद्ध आमाबुबाको हेरविचार कसरी गर्ने भन्नेबारे बाइबलले किन तोकेरै निर्देशन दिएको छैन?
८ आमाबुबाको भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी हुर्किसकेका छोराछोरीको हो। पावल विश्वासी आफन्तहरूलाई मदत गर्नेबारे कुरा गर्दै थिए तर हाम्रा आमाबुबा यहोवाको साक्षी होइनन्‌ भने पनि उनीहरूको हेरविचार गर्नुपर्छ। प्रत्येक परिवारको परिस्थिति फरक-फरक हुन्छ। त्यसैले कसरी हेरविचार गर्ने भनेर प्रत्येक परिवारले आफै निर्णय गर्नुपर्छ। प्रत्येकको स्वास्थ्य अवस्था, आवश्यकता र स्वभाव फरक-फरक हुन्छ। केही वृद्धको थुप्रै छोराछोरी हुन्छन्‌ तर केहीको एक जना मात्र। केही वृद्धले सरकारबाट सहयोग पाउँछन्‌, केहीले भने पाउँदैनन्‌। हेरविचारको आवश्यकता परेकाहरूको रुचि पनि फरक-फरक हुन्छ। त्यसकारण वृद्ध आमाबुबा तथा आफन्तको हेरविचार गर्न भाइबहिनीले जे-जसो गरेका छन्‌, त्यसको आलोचना गर्नु बुद्धिमानी र मायालु कुरा होइन। धर्मशास्त्रलाई आधार मानेर गरेको हरेक निर्णयलाई यहोवा समर्थन गर्नुहुन्छ र हामीलाई सफल हुन मदत गर्नुहुन्छ। यो कुरा मोशाको समयदेखि नै सत्य साबित हुँदै आएको छ।—गन्ती ११:२३.
९-११. (क) केहीले कस्तो गाह्रो निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ? (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्) (ख) छोराछोरीले पूर्ण-समय सेवा छोड्न किन हतार गर्नुहुँदैन? उदाहरण दिनुहोस्।
९ आमाबुबा र छोराछोरी एकअर्काबाट टाढा बस्छन्‌ भने वृद्ध आमाबुबाको हेरविचार गर्न गाह्रो हुन सक्छ। आमा वा बुबा लडेर घाइते हुँदा वा अन्य गम्भीर समस्यामा पर्दा अचानक भेट्न जानुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई केही दिन वा लामो समय स्याहारसुसार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। *
१० आफ्नो जिम्मेवारीले गर्दा घरबाट टाढा बसिरहेका पूर्ण-समय सेवकहरूले गाह्रो निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। बेथेल सेवकहरू, मिसनरीहरू र परिभ्रमण निरीक्षकहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई यहोवाको आशिष्‌को रूपमा हेर्छन्‌। तैपनि आमाबुबा बिरामी हुँदा झट्टै यस्तो सोचाइ आउन सक्छ, ‘हामीले आफ्नो सेवा छोडेर आमाबुबाको हेरचाह गर्न घर फर्कनुपर्छ।’ तर आमाबुबाको आवश्यकता र इच्छा के छ, प्रार्थनापूर्वक विचार गर्नु बुद्धिमानी हो। कसैले पनि सेवाको सुअवसर छोड्न हतार गर्नुहुँदैन र यसो गर्नु सधैं आवश्यक नहुन पनि सक्छ। आमाबुबाको स्वास्थ्य केही समयमा राम्रो हुन्छ कि? आमाबुबाको मण्डलीका कोही मदत गर्न इच्छुक छन्‌ कि?—हितो. २१:५.
११ उदाहरणको लागि, घरदेखि टाढा बसेर सेवा गरेका दुई दाजुभाइको अनुभव विचार गर्नुहोस्। भाइ दक्षिण अमेरिकामा मिसनरी सेवा गर्थे र दाइचाहिं न्यु योर्कको ब्रूक्लिन बेथेलमा थिए। वृद्ध आमाबुबालाई मदत चाहिएकोले ती भाइहरू र तिनीहरूका श्रीमतीहरू आमाबुबालाई भेट्न जापान गए। मिसनरी सेवा गरिरहेका दम्पतीले सेवा छोडेर आमाबुबाकहाँ फर्कनेबारे सोचिरहेका थिए। त्यति नै बेला आमाबुबाको मण्डलीको एल्डरहरूबाट फोन आयो। एल्डरहरूले त्यस परिवारको अवस्थाबारे राम्ररी छलफल गरेका रहेछन्‌। उनीहरू ती मिसनरी दम्पतीले लामो समयसम्म मिसनरी सेवा गरेको चाहन्थे। एल्डरहरूले ती दम्पतीको सेवाको कदर गर्दै आमाबुबाको हेरविचार गर्न तिनीहरूलाई मदत गर्न चाहे। एल्डरहरूको मायालु मदत पाएकोमा त्यो परिवार एल्डरहरूप्रति धन्यवादी भयो।
१२. वृद्ध आमाबुबाको हेरविचार गर्ने विषयमा निर्णय गर्दा ख्रीष्टियन परिवारले कुन कुरा विचार गर्नुपर्छ?
१२ वृद्ध आमाबुबाको हेरविचार गर्ने विषयमा ख्रीष्टियन परिवारले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि त्यसले यहोवाको नामको आदर गर्छ कि गर्दैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। हामी कहिल्यै येशूको समयका धर्मगुरुहरूजस्तो हुन चाहँदैनौं। (मत्ती १५:३-६) आफूले गरेको निर्णयद्वारा यहोवा र मण्डलीको आदर भएको चाहन्छौं।—२ कोरि. ६:३.
१३, १४. मण्डलीले वृद्ध भाइबहिनीलाई मदत गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले कसरी देखाउँछ?
१३ भर्खरै पढेको अनुभवमा बताइएजस्तै तरिकामा सबैले पूर्ण-समय सेवकहरूलाई मदत गर्न सक्छन्‌ भन्ने छैन। तर वफादार वृद्धहरूलाई मदत गर्न मण्डलीले सक्दो गर्नुपर्छ भनी बाइबल बताउँछ। प्रथम शताब्दीको यरूशलेम मण्डलीमा ‘एक जना पनि खाँचोमा परेनन्‌।’ यसको अर्थ मण्डलीका सबै जना धनी थिए भन्न खोजिएको होइन। केही भाइबहिनी गरिब थिए, तर जम्मा भएको रकम “जसलाई खाँचो पर्थ्यो, त्यसैअनुसार वितरण गरिन्थ्यो।” (प्रेषि. ४:३४, ३५) पछि त्यस मण्डलीमा एउटा गम्भीर समस्या खडा भयो। “हरेक दिन खाना बाँड्दा” केही विधवालाई ‘बेवास्ता गरिएको’ थियो। त्यसकारण प्रेषितहरूले त्यस कामको लागि योग्य भाइहरू नियुक्त गर्ने निर्देशन दिए। यस्तो प्रबन्धले गर्दा सबै विधवाले समान रूपमा र प्रशस्त मात्रामा खान पाए। (प्रेषि. ६:१-५) इस्वी संवत्‌ ३३ पेन्तिकोसमा थुप्रै विदेशीहरू ख्रीष्टियन बने र विश्वास बलियो बनाउन यरूशलेममा नै बसे। तिनीहरूको दिनदिनैको आवश्यकता पूरा गर्न खाना वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। त्यो प्रबन्ध केही समयको लागि मात्र मिलाइएको भए तापनि मण्डलीहरूले खाँचोमा परेकाहरूलाई मदत गर्न सक्छन्‌ भनेर प्रेषितहरूको त्यस निर्णयले देखाउँछ।
१४ मण्डलीले कस्तो अवस्थामा ख्रीष्टियन विधवाहरूलाई भौतिक सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे पावलले तिमोथीलाई बताए। (१ तिमो. ५:३-१६) बाइबल लेखक याकूबले पनि अनाथ, विधवा वा कठिनाइ भोगिरहेकाहरूलाई मदत गर्नु ख्रीष्टियनहरूको जिम्मेवारी हो भने। (याकू. १:२७; २:१५-१७) प्रेषित यूहन्नाले पनि यस्तो लेखे: “कसैसित जीवन धान्न पुग्ने सरसम्पत्ति छ तर आफ्नो भाइलाई खाँचो परेको देखेर पनि कोमल करुणा देखाउन इन्कार गर्छ भने परमेश्वरको प्रेम उसमा कसरी रहन्छ र?” (१ यूह. ३:१७) प्रत्येक ख्रीष्टियनले खाँचोमा परेकाहरूलाई मदत गर्नुपर्छ भने मण्डलीले चाहिं नपर्ला र?
कुनै दुर्घटना भएमा मण्डलीले कसरी मदत गर्न सक्छ? (अनुच्छेद १५, १६ हेर्नुहोस्)
१५. वृद्धहरूलाई कुन हदसम्म हेरविचार गर्ने भन्ने कुरा केमा भर पर्छ?
१५ केही देशमा सरकारले वृद्धहरूलाई भत्ता दिन्छ र उनीहरूलाई मदत गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। (रोमी १३:६) तर केही देशमा भने त्यस्तो प्रबन्ध छैन। त्यसकारण परिवार र मण्डलीले वृद्धहरूलाई कुन हदसम्म हेरविचार गर्ने भन्ने कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ। ख्रीष्टियन छोराछोरी आमाबुबादेखि टाढा बस्छन्‌ भने आफूले चाहेजति गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन्‌। आफ्नो परिवारको अवस्थाबारे आमाबुबाको मण्डलीका एल्डरहरूलाई थाह छ कि छैन भनेर पक्का गर्न छोराछोरीले ती एल्डरहरूसित कुराकानी गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सरकारले दिने सुविधा पत्ता लगाउन एल्डरहरूले ती वृद्ध आमाबुबालाई मदत गर्न सक्छन्‌। कुनै बिल तिर्न बाँकी छ कि अथवा आमाबुबाले खानुपर्ने औषधी खाइरहेका छैनन्‌ कि, त्यस्ता कुराहरूबारे पनि एल्डरहरूले छोराछोरीलाई थाह दिन सक्छन्‌। छोराछोरी र एल्डरहरूबीच खुलस्त र स्पष्ट कुराकानी भएमा उचित समाधान भेट्टाउन सजिलो हुन्छ। आमाबुबाको नजिकै बस्नेहरूले यसरी मदत गरिदिंदा र टाढा बस्ने छोराछोरीलाई आमाबुबाको हालखबर बताइदिंदा परिस्थिति बिग्रन पाउँदैन र परिवारलाई अनावश्यक चिन्ता पनि हुँदैन।
१६. केही भाइबहिनी मण्डलीका वृद्धहरूलाई कसरी मदत गर्छन्‌?
१६ मण्डलीका भाइबहिनीहरू ती प्यारा वृद्धहरूलाई माया गर्छन्‌। त्यसैकारण उनीहरूलाई सक्दो मदत गर्न केही भाइबहिनीले आफ्नो समय र शक्ति खर्च गरेका छन्‌। यसरी तिनीहरू मण्डलीका वृद्धहरूलाई थप चासो देखाउँछन्‌। कसै-कसैले पालैपालो वृद्धहरूको हेरविचार गर्छन्‌। आफूले पूर्ण-समय सेवा गर्न नसके तापनि वृद्धहरूको हेरविचार गरेर उनीहरूका छोराछोरीलाई पूर्ण-समय सेवामा लागिरहन मदत गर्छन्‌। कस्तो राम्रो मनोभाव! तर अरूले जति नै मदत गरे तापनि आमाबुबाको हेरविचार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी छोराछोरीकै हो।
प्रोत्साहनदायी कुराकानी गरेर वृद्धहरूको आदर गर्नुहोस्
१७, १८. वृद्धहरू र उनीहरूको हेरविचार गर्नेहरूको मनोवृत्ति कस्तो हुनुपर्छ?
१७ वृद्धहरू र उनीहरूको हेरविचार गर्नेहरूले सकारात्मक मनोवृत्ति राखेमा गाह्रो परिस्थितिलाई पनि सजिलो बनाउन सक्छन्‌। उमेर ढल्कँदै गएकोले कहिलेकाहीं वृद्धहरू निराश र निरुत्साहित हुन सक्छन्‌। त्यसकारण वृद्ध भाइबहिनीको आदर गर्न र उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन विशेष प्रयास चाहिन्छ। तपाईं कसरी यसो गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूसित सकारात्मक कुराकानी गर्नुहोस्। ती प्यारा भाइबहिनी जीवनभर यहोवाप्रति वफादार रहेका छन्‌। त्यसकारण उनीहरू प्रशंसाको योग्य छन्‌। यहोवाको सेवामा उनीहरूले गरेको कुनै पनि कुरा उहाँ बिर्सनुहुन्न र हामी पनि बिर्सदैनौं।—मलाकी ३:१६; हिब्रू ६:१० पढ्नुहोस्।
१८ वृद्धहरू र उनीहरूको हेरविचार गर्नेहरूले बेला-बेलामा हँस्सी-मजाक गरेमा दैनिक कामकुरा गर्न सजिलो हुन्छ। (उप. ३:१, ४) साथै थुप्रै वृद्धहरू अनावश्यक माग गर्दैनन्‌। आफू दयालु भएमा अरूले अझ धेरै ख्याल गर्छन्‌ र भेट्न आइरहन्छन्‌ भनेर उनीहरूले बुझेका छन्‌। वृद्धहरूलाई भेट्न जानेहरूले यसो भनेको सुन्नु अचम्मलाग्दो कुरा होइन: “म त उहाँलाई प्रोत्साहन दिन गएको थिएँ। उल्टै मैले पो प्रोत्साहन पाएँ।”—हितो. १५:१३; १७:२२.
१९. वृद्ध र युवाहरूलाई गाह्रो परिस्थितिमा बलियो भइरहन केले मदत गर्छ?
१९ हामी दुःखकष्ट र पापका असरहरू नामेट हुने दिनको प्रतीक्षामा छौं। त्यतिन्जेल परमेश्वरका सेवकहरूले भविष्यमा पाइने अनन्त आशिष्‌मा ध्यान लगाइरहनै पर्छ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गर्दा गाह्रो परिस्थितिमा पनि बलियो भइरहन सक्छौं। विश्वास भएकोले नै “हामी हरेस खाँदैनौं, बरु हाम्रो शरीर क्षीण हुँदै गइरहेको भए तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्वचाहिं निश्चय पनि दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेको छ।” (२ कोरि. ४:१६-१८; हिब्रू ६:१८, १९) वृद्धहरूको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी भएकाहरूलाई अरू के कुराले मदत गर्न सक्छ? अर्को लेखमा केही मदतकारी सुझाव छलफल गर्नेछौं।
^ अनु.9यसपछिको लेखमा वृद्ध आमाबुबा र छोराछोरीका लागि मदतकारी हुने केही सुझाव दिइएको छ।
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण मार्च २०१४